Topy Maso Eran-tany | Mifohaza! Septambra 2013
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Bichlamar Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Xhosa Zoloa Éwé
Mitsonika be ny ranomandry any satria mihamafana ny tany. Lasa nisokatra àry ny Lalana An-dranomasina any Avaratra. Sambo 50 eo ho eo no efa nampiasa azy io tamin’ny 2012. “Raha jerena ny ranomandry nisy tany tamin’ny 30 taona lasa, rehefa vanin-taona mafana, dia efa ampahefatr’izay sisa ny amin’izao”, hoy i Peter Wadhams, mpampianatra iray any Grande-Bretagne.
Tsy nampoizin’ny mpikaroka hoe 700 mahery ny karazana bakteria ao amin’ny rononon-dreny vao avy niteraka. Mbola vao karohina hoe nahoana izy ireny no manampy ny zazakely handevon-kanina sy hiady amin’ny aretina.
Nanao fanandramana ny mpahay siansa anglisy. Hitan’izy ireo fa raha voan’ny gripa ny mpitondra fiara dia miadana kokoa ny fihetsiny, noho ny mpitondra fiara efa nisotrosotro.
Repoblika Demokratikan’i Congo
Elefanta an’aliny isan-taona no misy mamono atsy Afrika, mba hakana ivoara. Mbola tsy nisy toy izany mihitsy hatramin’izay. Indray mandeha aza nisy elefanta maromaro voatifitra teo an-tampon-dohany, angamba avy teny ambony helikoptera no nitifirana azy.
Nihamaty tsikelikely ny vato harana ao amin’ny Haran-dranomasina Lehibe tato anatin’ny 27 taona. Ny antsasany sisa amin’izao no velona. Milaza ny mpahay siansa fa ny rivo-doza sy ny karazana kintan-dranomasina no mahatonga izany. Noho ny fiakaran’ny mari-panan’ny rano koa, dia misy vato harana miofo ka maty.
Topy Maso Eran-tany—Septambra 2013